इजिप्टमा तनाव तन्किँदैछ
१. एउटा निर्वाचित सरकारको अनावश्यक विरोध गर्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण अहिले इजिप्ट भएको छ। इजिप्टमा निर्वाचनबाट मुस्लिम ब्रदरहुडका नेता मोहमद मोर्र्सीीराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनले राम्ररी काम गर्न पाएका थिएनन् कि उनको विरोध सुरु भयो। २. विपक्षीहरूले उनको यति चर्को विरोध गरे कि देशको शान्ति स्थिति नै बिग्रन गयो। जब शान्ति स्थिति खलबलियो… पुरा पढौ
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घमा स्वतन्त्र आवाज
१. सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको पाचौं राष्ट्रिय अधिवेशन नयाँ कार्यसमिति चयन गरी बुधबार राजधानीमा सम्पन्न भयो। नयाँ कार्यसमिति राजनीतिक पार्टीो भागवण्डा गरी गठन गरिएकोमा त्यस सङ्घसँग आवद्ध प्रतिनिधिहरूले असन्तोष जाहेर गरेका छन्। त्यसरी असन्तोष जाहेर गर्नेहरूले आफू स्वतन्त्र रहने उद्घोष गरेका छन्। २. भागवण्डाको आधारमा गठित कार्यसमितिको अध्यक्षमा मोहन चापागाई तोकिएका छन्। उनी एमाले समर्थित हुन्। अध्यक्षसहित ११ जना एमाले,… पुरा पढौ
भक्तपुरमा चुनाव पस्यो
१. असन्तुष्ट पार्टीहरूले अझ पनि चुनावमा सहमति जनाएका छैनन्। तिनीहरुलाई चुनावको मूलधारमा ल्याउने प्रयास जारी छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र असन्तुष्ट पक्षहरुबीच वार्ता भइरहेको छ। चार-छ दिनमा ती दुर्इ पक्षको वार्ता टु·निे अपेक्षा गरिएको छ। २. एकातिर चुनावका सम्बन्धमा त्यसरी वार्ता भइरहेको छ भने अर्कोतिर कोही चुनाव सम्भव होला र भन्नेहरु पनि छन्। त्यो जसले जे भने तापनि चुनावमा भाग… पुरा पढौ
लचकता परिणाममुखी हुनुपर्दछ
१. संविधानसभाको चुनावमा सबै दलले भाग लिनुपर्दछ भन्ने जनताको चाहना पूरा नहुने जस्तो भएको छ। चुनावको पक्षमा रहेका र विपक्षमा रहेका पार्टीरूको वार्ता असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मोहन वैद्यको नेकपा-माओवादीबीचको वार्ता त्यसै टुङंगनिे जस्तो छ। २. वार्ताकार दुवै पक्षले आफ्नो पक्षले हदैसम्मको लचिलो भएर प्रस्तुत भएको जनाएका छन्। बाहिर भन्दा हदैसम्मको लचिलो भन्ने भित्र आफ्नो… पुरा पढौ
सभापति सुशीलको सम्पन्न भारत भ्रमण
१. नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला ६ दिने भारत भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार अपरान्ह स्वदेश र्फकेका छन्। स्वदेश र्फकने क्रममा उनले आफ्नो भारत भ्रमण पूर्ण रूपमा सफल भएको बताएका छन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रेपछि पत्रकारसँगको भेटमा भारतसँग सद्भाव बढाउन र पार्टीपार्टीबिचको सम्बन्ध सुधार गर्न भ्रमण सफल रहेको उल्लेख गरेका छन्। २. भारतले सभापति सुशील कोइरालाभन्दा पहिले पार्टीका वरिष्ठ नेता… पुरा पढौ
सहमतिमा पुग्नु आवश्यक
१. लामो समयको प्रयासपश्चात् उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र चुनावको विपक्षमा विभिन्न घटकहरूबीच छुट्टा छुट्टै वार्ता भएको छ। पूर्व र पश्चिम र्फकेर बसेका राजनीतिक पार्टीबीच वार्ता भयो मात्र भन्दा पनि सर्वसाधारणको मनमा अब त होला कि भन्ने आशा पलाउँछ। पहिलो चरणको वार्ता सौहार्दतापूर्वक भएको छ। २. तर वार्ताको दोस्रो चरण पूरा नहुँदै ती दुवै पक्षले आ-आफ्नो विचार बाहिर सार्वजनिक गरेका छन्।… पुरा पढौ
सङ्गीतका धरोहर प्रज्ञारत्न रहेनन्
१. सङ्गीतका धरोहर बौद्ध उपासक प्रज्ञारत्न बज्राचार्यको सोमबार राति पोखरामा निधन भयो। उनी केही समयदेखि उच्च रक्तचाप, मुटु र आखिरीमा मृर्गौको रोगबाट पीडित भएका थिए। उनको मणिपाल अस्पतालमा उपचार गर्दार्गर्दै निधन भएको थियो। पाल्पा तानसेनमा जन्मेका उनी ७९ वर्षका थिए। २. उनको परिवार २००० सालमा तानसेनबाट पोखरामा आएको थियो। त्यसैबेलादेखि पोखरा त्यस परिवारको कर्मथलो भयो। प्रज्ञारत्न बज्राचार्य बाल्यकालदेखि गायनमा सोख… पुरा पढौ
फेरि विश्वविद्यालयको कुरा
१. पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउने कुरा फेरि उठेको छ। १५।२० वर्षदेखि उठेको यो कुरा कहिले चर्किने गर्दछ भने कहिले सेलाउने गरेको छ। यसपटक कुरा उठाएको अरुले होइन, स्वयं उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हो। उपराष्ट्रपति झाले त्यसमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने कुरा पनि बताएका छन्। २. उपराष्ट्रपति झा जोर्ज जोन शिक्षा प्रतिष्ठानको एक कार्यक्रममा सहयागी हुन पोखरा आएको बेला उक्त आश्वासन… पुरा पढौ
भारतको तेलङगानाको प्रभाव
१. संघीय राष्ट्र भारतमा त्यहाँको सत्तारूढ पार्टीभारतीय काङ्ग्रेस पार्टीले दक्षिण भारतमा नयाँ राज्य तेलङ्गानाको निर्माण प्रक्रिया सुरू गरेको छ। सत्तारूढ पार्टीले नयाँ राज्य निर्माणमा प्रक्रिया सुरू गर्ना साथ तेलङ्गानाका माग गर्नेहरू खुशी भएका छन्। तिनीहरूले लामो संर्घर्षका प्रतिफलस्वरूप छुट्टै राज्य पाएका छन्। २. तर सत्तारूढ पार्टीले त्यो निर्णय गर्ना साथ छुट्टै राज्यको माग गर्दै आएका अन्य आन्दोलनकारीहरूले पनि यही बेला… पुरा पढौ
बहिस्कार गर्नु देशलाई बन्धक बनाउनु हो
१. निर्वाचन आयोगले मतदाताको नाम सड्ढलन गरेर उम्मेदवारले निर्वाचनको लागि नाम मनोनयन गर्ने तिथि पनि तोकेको छ। एकातिर निर्वाचन आयोग आफ्नो काममा अघि बढिरहेको छ। तर अकोर्तिर बहिस्कार गर्नेहरू बहिस्कार र वार्ता दुवै एजेण्डा बोकेर अघि बढिरहेका छन्। जनता कौतुहलतापूर्वक स्थिति नियालिरहेका छन्। २. नेकपा-माओवादीले सार्वजनिक ठाउँमा मत पेटिका फुटालेर बहिस्कारको घोषणा गरेपछि सर्वसाधारण हैरान भएका छन्। सर्वसाधारण र जनता… पुरा पढौ